तस्करीको कपडा न्युरोडमा छ्याप छ्याप्ती : दैनिक ५ अर्बको तस्करी, यी हुन् मुख्य तस्कर ! | Diyopost - ओझेलको खबर तस्करीको कपडा न्युरोडमा छ्याप छ्याप्ती : दैनिक ५ अर्बको तस्करी, यी हुन् मुख्य तस्कर ! | Diyopost - ओझेलको खबर
तस्करीको कपडा न्युरोडमा छ्याप छ्याप्ती : दैनिक ५ अर्बको तस्करी, यी हुन् मुख्य तस्कर !
दियो पोस्ट बिहिबार, फाल्गुण १९, २०७८ | २०:३४:०४
काठमाडौं । भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइने लत्ता कपडाहरुमा राजश्व अनुसन्धान विभागले कडा निगरानी गर्न थालेपछि तस्करहरुले नयाँ रुटबाट तस्करी थालेका छन् । केहीदिन अघि चितवन प्रहरीले करिब ३ करोड मुल्य बराबरको लत्ता कपडासहित ४ वटा मालबाहक ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त ट्रक वीरगन्ज भंसार कार्यालयबाट कसरी छुट्यो र भन्सार नै नतिरी कसरी चितवनसम्म आइपुग्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । तर, प्रहरीले हालसम्म मुख्य तस्करहरुलाई पक्राउ गर्न समेत सकेको छैन । सामान्य भरिया र चालकलाई मुद्दा लगाएर ठूला तस्करहरुलाई खुला छाडिँदै आएको छ ।
गत फागुन १२ गते इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीका प्रमुख प्रहरी निरिक्षक सुवास भट्टको कमाण्डमा खटिएको प्रहरीले बाहिर फलामको डण्डी देखाएर भित्र कपडा लुकाएको अवस्थामा चार वटा ट्रक फेला परेको थियो । उक्त गाडीमा ८६ वटा पोका कपडा भेटिएको थियो ।
नेपालमा भारतबाट यसरी अवैध तस्करी गर्ने मुख्य नाइके रमा शंकर कलवार हुन् । त्यस्तै अर्का नाइके गुड्डु गुप्ता, सनोज कलवार, मनोज कल्वार लगायत तस्करहरु भारतको रक्सौलका बासिन्दा हुन् । तस्करीको बादशाह भनेर चिनिने मदन गुप्ताले वीरगन्ज नाकाको जिम्मा लिएका छन् । उनै गुप्ताको भंसार सेटिङमा यस्ता माल तस्करी हुँदै आएको छ । गुप्ताले महाशक्ती ट्रान्सपोर्ट संचालन गर्दै आएका छन् । उनले सानेपामा ठूलो स्टोर गराउने र न्युरोडका पसलहरुमा पुर्याउने गरेका छन् ।
वीरगन्ज भन्सारमा निगरानी बढेपछि गुप्ताले यतिबेला भैरहवा भन्सार कार्यालयको सेटिङमा भैरहवाको नाका प्रयोग गर्ने गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको भैरहवा कार्यालयमा समेत गुप्ताले राम्रै सेटिङ गरेको स्रोत बताउँछ । नवलपरासी भैरवा कपिलवस्तु नाकाबाट रामेश्वर तिवारीहरुले समेत तस्करी गर्दै आएका छन् । वीरगन्ज नाकामा राजु थापा भनिने राजेन्द्र थापाहरु पनि सक्रिय छन् । ट्रास्पोर्ट व्यावसायी संघ वीरगन्जका अध्यक्ष बालकृष्ण पोखरेल पनि तस्करीमा सक्रिय व्यक्ति हुन् । तस्करीका मुख्य नाइके रमाशंकरको न्युरोडमा एक अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै गुड्डु गुप्ताले न्युरोड क्षेत्रमा ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सनोज र मनोज कल्वारले न्युरोडमै ४० करोड बराबर लगानी गरेका छन् । उनीहरुको लगानीमाथि सम्पत्ति सुद्धिकरणले छानबीन गर्ने हो भने सबैको सम्पत्ति जफत हुने अवस्थामा रहेको स्रोतले बतायो । तस्करीबाट रुन्चे भनिने मदन गुप्ता, रामेश्वर तिवारी, बालकृष्ण पोखरेल र राजु थापाहरुले अर्बौंको साम्राज्य खडा गरेका छन् । हाल मनोज कलवारलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेपछि तस्करहरुको भागभाग भएको छ ।
केही तस्करहरु यतिबेला रक्सौलसम्म पुगेको स्रोतले बतायो । चितवन प्रहरीले बरामद गरेको ३ करोड मुल्यको लत्ताकपडा पनि रुन्चे भनिने मदन गुप्ता र राजु थापाहरुको रहेको स्रोतले दियोपोस्टलाई बतायो । केहीदिन अघि वीरगन्जस्थित रुन्चे मदनको गोदाममा राजश्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्दा १ सय बोरा भन्दा बढी सामान बील बिनाको भेटिएको थियो । तर, अहिले उक्त सामानहरु भंसार छुट गराएर नेपाल भित्र्याउने सेटिङ चलिरहेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागकै स्रोतका अनुसार नेपालमा दैनिक १० हजार बोरा कपडा विभिन्न नाका हुँदै भंसार छली गरेर तस्करी हुँदै आएको छ ।
एक बोरा कपडाबाट राज्यलाई २६ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भंसार शुल्क प्राप्त हुन्छ । तर, तस्करहरुले कपडा राखेको ट्रकमा भंसार नलाग्ने आलु लगायत तरकारी छ भन्दै टिपाएर भित्र भने कपडा लुकाएर नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् । बीरगन्जमा छापा मारेपछि यतिबेला तस्करहरुले अर्को रुट परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।
ठुटिबारी, महेशपुर नवलपरासी, कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट व्यापक रुपमा तस्करी भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार तस्करहरुले दैनिक ५ अर्ब मूल्य बराबरको कपडा मात्रै राजश्व र भन्सार छली गरेर नेपाल भित्र्याइ रहेका छन् । तर, राजश्व अनुसन्धान विभाग भने मौन जस्तो देखिन्छ ।
फल्स बटम बनाएर यसरी हुन्छ तस्करी
तस्करहरुले भारतीय ट्रकमा फल्स बटम बनाएर भन्सार नतिरी चोरी पैठारी गर्दै आएका छन् । गत वर्ष भदौमा राजश्व अनुसन्धान विभागले वीरगन्ज महानगरपालिका १० घर भएका रजनिश गुप्ता, राजु भनिने राजेन्द्र थापासहित ६ जनालाई ३ करोड १९ लाख रुपैयाँ विगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरको थियो ।
उनीहरुले भारतीय ट्रकमा फल्स बटम बनाएर कपडा तस्करी गरेका थिए । उनीहरुलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा लगाएपनि तस्करीको धन्दा भने रोकिएको छैन ।
बिहिबार, फाल्गुण १९, २०७८ | २०:३४:०४